musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Ndiri Kuda Mwana: Kufamba Nechinangwa!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kunyangwe hofisi yekuronga yekufambisa yakanyorwa kuti Fertility Tourism, Kuberekana Kufamba, kana Cross Border Kubereka Kuchengeta, vakadzi nevakaroora vari kusiya dzimba dzekumba kwavo ne "kuita mwana" pamusoro pezvavanoda kuita.
Chido chekuva nemwana hachiganhurirwi kune mari, zera, zvebonde, kana jogirafi.
Tsvagiridzo inofungidzira icho chokwadi chekuti vakadzi vanobva pasi- nepakati-vanowana nyika dzinotambira (LMICs) pamwe nekubva kumaguta makuru eEuropean neAmerica vachafamba kuzoita mwana.
World Health Organisation inofungidzira kuti mumwe muvanhu vana muLMIC vane matambudziko ekubereka.
Inofungidzirwa kuti mamirioni gumi nematanhatu emurume nemukadzi munyika idzi (kusabatanidzwa China) vapedza makore mashanu vachiedza kubata nhumbu pasina kubudirira. Nepo mamiriro ekurapa akajairika kumatambudziko ekubereka munyika dzese dzakapfuma, mune dzimwe tsika, vakadzi vasina mbereko vanowanzo dzivirirwa nemhuri dzavo uye kusiyiwa kubva mumisangano yemagariro netsika dzechivanhu. Ivo vanowanzo kuve varikushungurudzwa mumhirizhonga mudzimba kana kurambwa nevarume vavo. Kunyangwe kushaya mbereko kungangoitika kubva kumatambudziko nehurume hwekubereka senge hwechikadzi, kazhinji vakadzi vanopomerwa kutadza kubereka mwana.
Kushaya mbereko kunoonekwa seyakakomba nyaya yehutano uye kukanganisa 8-10 muzana yevakaroora pasirese. Iwo Centers for Disease Control (CDC - 2013) uye Hofisi yeVakadzi Hutano (2019) vakaona kuti 9 muzana yevarume uye gumi muzana yevakadzi vane makore gumi nemashanu - 10 vaibata nematambudziko ekushaya mbereko muUS uye reproductive Biological Endocrinology report (15) yakatemwa kuti vangangoita mamirioni makumi mana nemakumi mashanu emurume nemukadzi vanoona kushaya mbereko pasirese.
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inofungidzira kuti 750,000 vagari vemuUS vanoenda kunze kwenyika kunowana hutano gore rega. Kushanya kwekubereka parizvino inodzora isingasviki zvikamu zvishanu kubva pamakumi mashanu emadhora makumi mashanu emadhora (5) musika wekushanyirwa kwekurapa; zvisinei, zvinotarisirwa kunge zvakapetwa kane muhukuru pamusoro pemakore mashoma anotevera. Inofungidzirwa kuti musika wepasi rose wehunyanzvi hwekubereka hunyanzvi hwakaunza mari inosvika madhora makumi maviri nemaviri emamiriyoni (55) nemishonga yekubereka iri munda unokurumidza wemishonga.
Vanhu vanobvuma kuti vari kutarisana ne "nyaya dzekubereka," kana vasingakwanise kuve nekliniki yekuzvitakura mushure memwedzi gumi nemiviri yekuyedza kusangana. Kushaya mbereko, kana kusakwanisa kubata pamuviri, zvinokanganisa zvikamu zvisere kubva muzana kusvika gumi nezviviri zvevakaroora vari kutsvaga kubata pamuviri kana 12 mamirioni vanhu pasi rose. Mune dzimwe nzvimbo, mitengo yekushaya mbereko inodarika avhareji yepasirese uye inogona kukwira kusvika pamakumi matatu muzana zvichienderana nenyika.
Maitiro akakosha ndeye invitro fetiraiza (IVF), insemination yekuzvidzivirira kubva kune mupi pamwe nekuzvimiririra uye inosanganisirwa neAnobatsira Reproductive Technology (ARTs).
Zvinokurudzirwa kuenda kunorapwa zvinokurudzirwa neinishuwarenzi isina kukwana kana kusava nehutano kumba uye kuwedzera kuda kwenzira dzinogona kunge dzisingafukidzwe nehurongwa hweinishuwarenzi huripo sekurapa kubereka, kudzoserwa kwevanhurume nevanhukadzi, kuvakazve mazino uye kuvhiya kwekuzora.
Vamwe vafambi vanoita zvekushanya kwekubereka pavanoziva kuti varapi varinani (kana kuvandudzwa) vekubereka varipo kunze kwenharaunda yavo vamwe vachitsvaga kurapwa kunze kwenzvimbo yavo kuti vadzivise mitemo, nhanho-dzepamutemo / dzehunhu / dzechitendero kana zvimwe zvinorambidzwa / kana kudzivirira manhamba akamirira akareba. Nyika zhinji hadzibvumidze kurapwa kwekubereka kune vakaroora kana vakadzi vasina murume. Sekureva kwevakuru veInstitute for Development and Integration of Healthcare (IDIS Foundation), "zvikonzero nei vanhu vachienda kunze kwenyika kunotsvaga kurapa kwekubereka zvinogona kuiswa muzvikamu: mutengo, mhando, uye kuwanikwa kwekurapwa ..."
Zvisinei, kunyangwe navanachiremba vakanakisa nemakiriniki epamberi mikana yekuve nemwana nerubatsiro rwesainzi yekurapa haina kukura. Kune vakadzi vari pasi pemakumi matatu nemashanu, chete makumi matatu neshanu muzana ndivo vanozobata nhumbu paVIV kutenderera vachishandisa avo vasina-mazaya mazai (CDC). Nezera makumi mana nemana, zviri pasi pezvikamu zviviri kubva muzvitatu zveizvozvo; mushure memakumi mana nemaviri, huwandu hwacho hunodonha neimwe hafu kusvika pa35 muzana Mitengo yeIVF uchishandisa yaanopa zai yakakwira asi ichiri yakaderera pane makumi mashanu muzana. Kunyange huwandu hwebudiriro huchionekera pawebhusaiti yekiriniki, Carolin Schurr, geologist paUniversity yeBern uyo anoongorora indasitiri yekudyara yepasi rose ndeyekushomeka kwemitengo yekubudirira yakashambadzirwa nekuti "zvinoenderana nekuti unovaverenga sei, uye pane nzvimbo yakawanda kushandisa zvisizvo. ”
Zvisinei nedata, kushanya kwekubereka kuri kuwedzera sezvo hutano hwakanaka hunowanikwa munzvimbo dzinoda mafambiro uye nzvimbo dzekurapa dzinopa varwere mamiriro-e-ehunyanzvi tekinoroji, mishonga mitsva, zvishandiso zvemazuva ano, kuvandudzwa kwekugamuchira vaeni, uye kuchengetedzwa kwevanhu pa "kukosha" mitengo.
Page 1 pamusoro 6 Prev Next